Hilton nọ n'ụzọ ihe karịrị okpukpu abụọ nke akara ukwu ya n'Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Hilton nọ n'ụzọ ihe karịrị okpukpu abụọ nke akara ukwu ya n'Africa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Malawi • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ka ọ na-aga n’ihu na-eto eto ọnụnọ ya n’Africa site na iwebata ụdị ọhụụ na ịbanye mba ọhụrụ, Hilton (NYSE: HLT) taa kwupụtara na ọ na-aga n’ihu karịa okpukpu abụọ nha n’ime afọ ise na-esote ya na oghere nke Legend Hotel Lagos Airport, Nchịkọta Curio nke Hilton - ụlọ ọrụ mbụ Curio Collection nke Hilton hotel na Africa.
Legend Hotel Lagos Airport dị na Murtala Muhammed International Airport, nke na-elekọta ihe karịrị nde ndị njem asatọ kwa afọ. Thelọ nkwari akụ ahụ dị n'akụkụ ọdụ ụgbọelu nke ọdụ ụgbọ elu ma nwee ọpụpụ na mbata kọstọm na nkwari akụ maka ndị njem ụgbọelu nke onwe. Ndị a họpụtara ka ha bụrụ akụkụ nke naanị nchịkọta nke otu ụlọ oriri na ọ -ụ celebratedụ na ụdị ntụrụndụ a na-eme maka ọdịmma ha, ụlọ nkwari akụ ahụ na-esonye karịa hotels 60 Curio Collection gburugburu ụwa. Nke a bụ ụlọ nkwari akụ mbụ na Hilton na nke abụọ na Nigeria, yana ụlọ nkwari akụ asaa ọzọ dị na paịpụ mmepe ya maka mba ahụ.
N'ikwu okwu n'ihu nke Africa Hotel Investment Forum (AHIF) na Nairobi, Onye isi oche na onye isi oche Hilton, Chris Nassetta, kwuru, sị: “Anyị na-aga n'ihu na-emepụta ihe ọhụrụ na Africa site na iji akara na ngwaahịa ọhụrụ, ma anyị nwere obi ụtọ ịmebata akara Curio Collection anyị ebe a. oghere nke Legend Hotel Lagos Airport. Ka kọntinenti a na-aga n’ihu na-aga n’ihu obodo, na UN ịkọ amụma na obodo iri na-eto ngwa ngwa n’ụwa niile ga-anọrịrị n’Africa tupu afọ 10, ụlọ oriri na ọ thisụ thisụ a bụ akụkụ nke atụmatụ anyị iji jikọta ndị ọbịa n’obodo ndị dị mkpa na ọdụ ụgbọ elu gafee mpaghara ahụ. ”
Hilton na-ahụ nnukwu ọchịchọ maka ụdị ya gafee kọntinent ahụ ma na-atụ anya imepe ụlọ oriri asatọ na mkpokọta gafee Africa n'afọ a, atọ n'ime ha ga-efe n'okpuru ọkọlọtọ Hilton Garden Inn. Branddị a na-arịọ ịrị elu nke ndị njem na-eto eto n'etiti ma gafee Africa na ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya imepe opekata mpe ụlọ nkwari akụ Hilton 16 n'ime afọ ise na-abịanụ, gụnyere ntinye aha na Kampala, Ghana, Malawi, eSwatini (nke bụbu Swaziland) na ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị na mpaghara Sahara Africa.
N'afọ gara aga, Hilton malitere Hilton Africa Growth Initiative, nke ga-akwado ntụgharị nke ụlọ oriri dị ugbu a na ụdị Hilton site na itinye ego nke $ 50 nde n'ime afọ ise. N'ime oge ahụ, Hilton na-atụ anya ịchekwa ohere ntughari 100 yana ụfọdụ ụlọ 15-20,000 gbakwunyere na pọtụfoliyo ya iji gboo mkpa na-eto eto maka ụlọ ama ama mara mma gafee kọntinenti ahụ.
Hilton kwadoro ịba ụba na ohere gafee Afrịka ma bụrụkwa ọnụnọ na-aga n'ihu na kọntinent ahụ kemgbe 1959. Site na ụlọ nkwari akụ 41 mepere emepe na 53 na pipeline mmepe ya na Africa, Hilton na-atụ anya ịbawanye akara ukwu ya gafee kọntinenti n'ime afọ ise na-esote. Nke a gụnyere ntinye ahịa na mba 13 ebe ọ naghị arụ ọrụ ugbu a gụnyere Botswana, Ghana, eSwatini (nke bụbu Swaziland), Uganda, Malawi na Rwanda.